I-ecosystem of Lifecycle Marketing | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 8, 2012 NgoLwesithathu, Okthoba 10, 2012 UJenn Lisak Golding
Ukunaka ukumaketha impilo kubalulekile ezimakethe zanamuhla, yingakho ngijabule kakhulu ukusebenza neklayenti lami, i-Right On Interactive, ekwakheni nasekwenzeni i-infographic ngalesi sihloko. I-infographic ihlanganisa yonke into kusuka esizukulwaneni esiholayo kuye ekuzenzekelayo kokumaketha kuya ekuguqulweni, kanye nokubhekana nezinselelo nekusasa kule ndawo.
Njengoba ukumaketha okuzenzakalelayo kungaphansi kweminyaka eyi-10, sisafunda ngomkhakha nokuthi ungasetshenziswa kanjani ukufinyelela ezinhlosweni zethu zokumaketha. Le infographic igcizelela iqiniso lokuthi sibhekene nokukhula okusheshayo kulo mkhakha, futhi sidinga ukuba nezinqubo ezikhona zokufinyelela amathemba namakhasimende ngezindawo zokuthinta eziningi. Kepha futhi kufakazela ukuthi izinto zishintsha ngokushesha.
Ucabanga ukuthi ukumaketha okuzenzakalelayo nokumakethwa kwemijikelezo yempilo kuzoshintsha kanjani ngonyaka olandelayo? Iminyaka emi-5 elandelayo?
I-Oct 8, i-2012 ku-12: i-51 PM
Siyabonga ngokwabelana, bafana! Kube yintokozo ukusebenza nani nonke ukudonsa le infographic ndawonye. Ngicabanga ukuthi ucwaningo lwethu ngalokhu kuboniswa luveze ngendlela emangalisayo. Isikhala sobuchwepheshe bokumaketha siguquka ngesilinganiso esimangazayo - ngingasho ngokusuka mathupha ukuthi izixazululo zokumaketha ezishintshayo ezihambisana namasu amasha wokumaketha yizidingo ezintsha zenhlangano. Ngisanda kufunda namhlanje ekuseni kusuka kubhulogi leSirius Decisions ukuthi inani lezinkampani ze-B2B ezisebenzisa ukumaketha ezishintshayo likhula ngokushesha, nazo zilinganisela ukuthi inani lizokwenyuka ngo-50% ngonyaka ka-2015. Khuluma ngokukhula okukhulayo.
Kulabo kini abakhona lapho bacabanga ukusebenzisa isixazululo okokuqala ngqa, nasi iseluleko sami esibaluleke kunazo zonke: qiniseka ukuthi unomlingani oqinile onezinga elifanele lezinsizakalo ezifakiwe esivumelwaneni. Impumelelo yokusebenzisa isisombululo sokumaketha incike ngokuphelele ekusetshenzisweni okufanele nasekusebenziseni - futhi kulula kakhulu okokuqala ngqa.